Vaovao - Fisondrotana vaovao AD
Mifikitra amin'ny fanavaozana, manaraha miaraka amin'ny Times, ny fikatsahana fanahin'ny orinasa MAXIMA tonga lafatra dia manao ezaka lehibe hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny fanavaozana tsy tapaka, any ankoatra. MAXIMA dia niasa tamin'ny fanavaozana ny Heavy Duty Wireless Column Lift amin'ny lafiny fisehoana sy fiasa hatramin'ny 2011. Ary farany, MAXIMA dia nanao ny fandrosoana aorian'ny famolavolana sy fisafoana.
Amin'ny endriny dia misy fijery vaovao miaraka amin'ny loko fotsy sy manga. Azafady mba jereo ny sary etsy ambany. Ao amin'ny fiakarana vaovao dia misy efijery 9 'lehibe mikasika lamba mampiseho ny kaody lesoka mifanaraka amin'izany ary ny dingana amin'ny antsipiriany mitarika ny mpampiasa hanamboatra ny lesoka, izay manamora ny fandidiana mety. Ny loko vaovao dia manintona kokoa sy mahavariana kokoa.
Amin'ny fe-potoam-piasana, MAXIMA dia namolavola ireo fiasa fifandraisana maimaimpoana vaovao. Ny fifandraisana maimaim-poana dia midika fa mitovy ny tsanganana rehetra; ny tsanganana manana fahaiza-manao mitovy dia afaka mivondrona malalaka toy ny napetraka amin'ny fotoana rehetra. Ohatra, misy fiakarana tsy misy tariby 16 miaraka amin'ny fiasan'ny fifandraisana maimaim-poana, azonao atao ny misafidy ny ampahany amin'izy ireo ho vondrona iray toy ny seta 2-, 4-, 6-, 8-, na hatramin'ny 16-tsanganana, amin'ny alàlan'ny fametrahana tsotra -ups, miorina amin'ny maodely tsy misy tariby fototra. Io fiasa io dia mandao ny foto-kevitry ny tsanganana lehibe sy ny andry andevo. Ny fiakarana rehetra dia mety ho ny tsanganana lehibe ary koa hamondrona ireo tsanganana tsy ara-dalàna ao anatin'ny fahaiza-manao mitovy amin'ny napetrak'ireo fananganana tsotra.
MAXIMA dia hanokana hatrany ny rehetra hanaraka ny tsena sy ny mpitarika ary ny fironana, miasa amin'ny fanavaozana sy ny fahalavorariana ireo modely vaovao Heavy Duty Column Lift. Ato ho ato dia hanao fandrosoana bebe kokoa ny MAXIMA ary hampivelatra asa bebe kokoa hanamorana ny fampiasana sy fikojakojana isan'andro. Aza hadino ny miandrandra sy misaotra ny sainao.